किन कोरियन सियोन भूmन्ड भूटा हुन् ? अथवा वर्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गड (WMSCOG) भनेको के हो ? अनि को हुन् यी माता भनेकी चाहिँ ? | eBachan Nepali Christian Magazine
“येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, ‘होसियार रहो ¤ कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्’। किनकि धेरै जना मेरो नाउ“मा म ख्रीस्ट हु“’ भन्दै आउनेछन् र धेरैलाई बहकाउनेछन्” (मत्ती २४ः४–५) । नेपालमा विगत केही समयदेखि भूmटा शिक्षकहरुको बिगबिगी धेरै भएको छ । यहाँ यहोवाको साक्षी लगाएत वल्र्डमिसन सोसाइटी चर्च अफ गड विश्वासीहरुलाई भड्काउन निकै सक्रिय भएका छन् । वल्र्ड मिसनले विश्वासीहरुलाई बहकाउनको लागि मुख्यगरी दुईवटा विषयमा विवाद निकालेर छल्ने काम गरेको छ । एउटा कुरा निस्तार चाड र क्रिसमसको विषयमा विवाद निकालेर विश्वासीहरुलाई भ्रममा पार्ने काम गर्छ भने अर्काे कुरा माता मान्नुपर्छ, परमेश्वर माता पनि हुनुहुन्छ भनेर बहकाउने काम गरिरहेको छ । अब हामी वर्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गड९ध्ःक्ऋइन्० भनेको के हो र उनीहरुले के विश्वास गर्छन् ? भन्ने बारेमा छोटकरीमा हेर्नेछौं ।
वर्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गडले नेपालमा ‘परमेश्वरको मण्डली’ भन्ने भूmन्ड खडा गरेका छन् । उनीहरुले शहरका सबैभन्दा महंगा भवनहरुमा महंगो भाडा तिरेर भूmण्ड संचालन गरिरहेका छन् । जाऊलाखेलको युनिटी टावर, ग्रिनल्याण्डको प्रभु बंैकको हल, ग्वार्काेको माछापुछ«े बैंकको माथिल्लो हल, किर्तिपुरको सबैभन्दा महंगो हल, बौद्धको आराधाना हल जस्ता महंगा माथिल्ला हलहरूमा भेला भएर आपूmहरूलाई निकै नै माथिल्लो स्तरको देखाउन चाहने यिनीहरूको लागि येशूले भन्नुभयो,‚“किनकि तिमीहरू चून लाइराखेका चिहानहरू जस्ता छौ, जो बाहिरपट्टी सुन्दर देखा पर्छन्, तर भित्रपट्टी ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘भने मरेका मान्छेहरूका हाडहरू र सबै अशुद्धताले भरिएका हुन्छन्” (मत्ती २३ः२७) । विश्वासमा कमजोर हुनेहरूलाई यिनीहरूले सजिलै बहकाउने गरेका छन् २तिमोथी ३ः६–९) । यसकारण मण्डलीलाई आÇना भेडाहरू जोगाउन र विश्वासीहरूले पनि यो भूmटो शिक्षाको बारेमा सत्य कुरा बुझ्न सकून भनेर यो खोजमूलक लेख यहाँ राखिएको छ ।
वर्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गडको संस्थापक आन साङ ह∙ हुन् । दक्षिण कोरियाली ह∙ले १९६४ मा यसको सुरुवात गरेका हुन् । उनी १९१८मा बुद्धिष्ट घरानामा जन्मिएका र धेरै वर्ष सम्म सेभेन्ड डेज एभान्टेजमा रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन् । सेभेन्ड डेज एभान्टेजमा रहँदा उनले निकै नै विवादास्पद तर्कहरू गरेकोले उनलाई त्यहाँबाट पनि भूmटा शिक्षक भनेर त्यहाँबाट निकालिएको हो । सन् १९८५मा उच्च रक्तचापको कारण हस्पिटलमा उपचार गराउँदा गराउँदै उनको मृत्यु भयो ।
आन साङ हङले आÇनी श्रीमती छाङ् गिल–जालाई माता भनी घोषणा ग¥यो, जसलाई स्वर्गीय माता वा स्वर्गीय यरुशलेम माता भनी उसका चेलाहरूले पत्याएका छन् । वर्ड मिसन सोसाइटीले परमेश्वर पिता र परमेश्वर माता भनेर विश्वास गर्छ र परमेश्वर माता शरीरमा यस पृथ्वीमा आउनुभएको हो भनेर दाबी गर्छ । आन साङ हङ की पत्नी छाङ्क गिल जा उनीहरुको बीचमा “स्वर्गीय माता” को नामले परिचित छ । वर्ड मिसन सोसाइटीको अनुसार, परमेश्वर माता उनीहरुको विश्वासको केन्द्र र मार्गचित्र हो जसले उनीहरुलाई अगुवाई गर्छ । जब उनीहरुलाई संकष्ट आउँछ तब परमेश्वर माता उनीहरुको लागि प्रार्थना गर्न खडा हुन्छिन् भनेर उनीहरु पत्याउँछन् । तर परमेश्वर माताको अस्तित्व बारे बाइबलले कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भनेर निरन्तर उल्लेख गरिएको छ । प्रकाश २१ः२ मा नयाँ यरुशलेमलाई सिङ्कारिएकी दुलहीको रुपमा वर्णन गरिएको छ । तर पद ९र १० ले थुमाकी दुलही र नयाँ यरुशलेम पर्यायवाची शब्द हुन भनी देखाउँछ । नयाँ यरुशलेम एउटा शहर हो तर व्यक्ति होइन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । यस अवस्थामा यरुशलेम भनेको चर्च पनि हो, जहाँ उद्धार गरिएका मानिसहरुको साथमा परमेश्वर बस्नुहुन्छ । थुमाकी दुलही लाक्षणीक हो, शाब्दिक होइन ।
वर्ड मिसन सोसाइटी अथवा सियोन झुण्डको अर्काे भूटो शिक्षा यो हो, उनीहरु भन्छन् कि परमेश्वर पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा फरक व्यक्तित्व होइन तर परमेश्वर फरक प्रकारले प्रकट हुनुभएको हो । यसो हेर्दा यो विचार ठीकै लाग्ला तापनि बाइबलले भन्छ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ तर फरक व्यक्तित्वबाट बोल्नुहुन्छ— परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र र परमेश्वर पवित्र आत्मा ।
वर्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गड (नेपालमा परमेश्वरको मण्डली वा सियोन) ले विश्वास गर्छ कि यहोवा परमेश्वर पिता, पुत्र येशू खीस्ट र आन साङ हङ पवित्र आत्मा । बाइबलले बताउँछ कि पवित्र आत्मा मन, संवेगहरु र इच्छाहरूसँग सम्बन्धित इश्वरीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पे्ररित ५ः३—४ लगयतका पदहरूमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यसकारण कुनै मानिसले आपूmलाई पवित्र आत्मा भनी दाबी गर्छ भने त्यो भूmटा हो ।
वर्ड मिसन सोसाइटी (नेपालमा परमेश्वरको मण्डली वा सियोन) ले सिकाउँछ कि परमेश्वर पितामा, येशू ख्रीस्टमा र आन साङ हङ मा मुक्ति छ र यसको लागि तीनै जनाको नाममा बप्तिस्मा लिनुपर्छ । बाइबलले सिकाउँछ कि मुक्तिचाहिँ येशू खीस्टमा मात्रै छ (प्रेरित ४ः१२,यूहन्ना १४ः६) । येशूको नाउँमा मुक्ति छ । आन साङ हङको नाउäमा मुक्ति छ भन्नु भूmटा हो । येशू ख्रीस्टमाथिको विश्वासमा केही कुरा थप्नु भनेको मुक्ति चाहिँ कर्ममा आधारित छ भन्नु हो । सुसमाचारले भन्छ कि हाम्रो मुक्तिको लागि क्रूसमा येशूको मृत्यु पर्याप्त छ र यसमा कुनै कुरा थप्नु जरुरी छैन । बाइबलले भन्छ कि येशू ख्रिस्टको रगत एक्लैले हाम्रो पाप चुक्ता गरेको छ (रोमी ५ः८ý २ कोरिन्थी ५ः२१) । हाम्रो विश्वासको निम्ति येशूको धार्मिकता मात्रै पूर्व निर्धारित थियो (यूहन्ना ३ः१६ý एफिसी २ः८–९) । यसकारण मुक्तिको निम्ति आन साङ हङ को नाउँमा बप्तिस्मा लिनु आवश्यक छैन ।
वर्ड मिसन सोसाइटी ले दाबी गर्छ कि आन साङ हङ पवित्र आत्माको युगमा आउनुभयो र उहाँ नै येशूको दोश्रो आगमन हुनुहुन्छ । उनीहरुको यो शिक्षा बाइबलले सिकाएको शिक्षासँग मिल्दैन किनकि प्रकाश १९ः१२–१३ ले भन्छ किः “उहाँमा एउटा नाम अङ्कित थियो, जो उहाँलाई बाहेक अरु कसैलाई थाहा थिएन । उहाँले रगतमा चोबलिएको पोशाक पहिरिनुभएको थियो, र उहाँको नाउँ ‘‘‘परमेश्वरको वचन’ थियो ।” यसकारण कुनै मानिसले आपैmलाई परमेश्वरको वचन भनेर दाबी गर्छ भने त्यो भूmटा हो ।
आन साङ हङ भूmटो अगमबक्ता हो । उसले १९६७ मा येशू फेरि आउनुहुन्छ भनेर अगमवाणी ग¥यो उसले फेरि मिति परिवर्तन गरेर १९८८मा आउनुहुन्छ भनी घोषणा ग¥यो । अनि मिति परिवर्तन गर्दै १९६७ बाट १९८८ र २०१२ को अन्त्यमा येशूको आगमन हुन्छ र पृथ्वीको अन्त्य हुन्छ भनी घोषणा ग¥यो । तर अहिलेसम्म येशूको आगमन भएको छैन, यसकारण आन साङ हङ भूmटा हो भनी इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । अब हामीहरुको लागि विचारणीय कुरा यो छ कि अन्त्यको दिनमा भूmटा अगमवक्ताहरु र भूmटा ख्रिस्टहरु आउनेछन् भनी बाइबलले भनेको छ । यसकारण स्पष्ट रुपले आन साङ हङ भूmटा अगमवक्ता र भूmटा ख्रीस्टको वर्गमा पर्दछन् ।
अनि स्पष्टसँग भन्न सकिन्छ कि वर्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गड (ध्यचमि ःष्ककष्यल क्यअष्भतथ ऋजगचअज या न्यम० को विश्वास ख्रीस्टियन विश्वासअनुसार छैन ।
अब हामी माताको बारेमा हेरौं
वल्र्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गड वा सियोन (नेपालमा परमेश्वरको मण्डलीबाट परिचित) को संस्थापक आन साङ हङकी श्रीमती छाङ्क गिल जा ९श्जबलन न्ष् िव्बज०लाई उनीहरु माता वा स्वर्गीय माता वा यरुशलेम माता भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । तर वास्तवमा यी माताको भित्री अनुहार भने अर्कै छ । यी माता वा छाङ्क गिल जाको पहिलो पति नाम जेइ हुन किम हो । सन् १९६६मा उनीहरुको विवाह भएको थियो र दुई सन्तान पनि जन्मेका छन् । त्यतिबेला उनीहरूको परिवार सबै आन साङ हङको चर्चमा जाने गर्थे । त्यसपछि छाङ्क गिल जाले आÇनो घर र जग्गा जमिन सबै बेचेर आन साङ हङले स्थापना गरेको वल्र्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गड मा दिईन् र उनका प्रथम पतिलाई कङ्काल बनाइदिइन् । त्यसपछि छाङ्क गिल जा ले उनको श्रीमान र परिवारलाई समय दिन पनि छाडिन् र आन साङ हङ को भक्त भएर निरन्तर उसको चर्चमा रहन थालिन् । उनको प्रथम पनि जेइ हुन किम ले धेरै सम्झाउँदा पनि छाङ्क गिल जा ले मानिन् र उनको प्रथम पतिलाई डिभोर्स दिईन् तर बाइबलले डिभोर्सको विषयमा यसो भनेको छ, “अनि यदि स्त्रीले आÇनो लोग्नेसँग विवाहविच्छेद गरेर अर्काेसँग विवाह गर्छे भने, त्यसले व्यभिचार गर्छे”(मर्कूस १०ः१२) ।
यसकारण बाइबलले भनेअनुसार माता भनेर कहलिएकी छाङ्क गिल जा व्यभिचारी स्त्री हुन् । वल्र्ड मिसन सोसाइटी चर्च अफ गडले नेपालमा ‘परमेश्वरको मण्डली’ को नाममा उनको प्रचार गरिरहेको छ । यसकारण यस्तो खालका भ्रमपूर्ण भूmटो शिक्षाबाट हामी सबै होशियार हुनु आवश्यक छ ।
Source : www.gotquestions.org/world-mission-society-of-God.html
Previous: येशू र पवित्र आत्माको सहायता मसिहा पार्टीलाई छ अरुलाई छैन – डा. रमेश खत्री
Next: प्रवासी जागृति मण्डलीको उदघाटन